Ihe omuma mpempe "Google My Business" Dị Mkpa Ọ bụla Onye Ọchịchị SEO Ga-ama
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ụlọ ọrụ ahụ na saịtị e-azụmahịa. Ndị na-agba ume ahịaịzụta site n'ụlọ ahịa anụ ahụ dị mkpa iji melite ego ahịa. Nakwa, iji Usoro Nyocha Search (SEO) mee ihemee ka okporo ụzọ ndị ahịa jiri abawanye uru ahịa. Google ewepụtawo ngwa jupụtara na njirimara nke na-eme ka njikwa nke azụmahịa ahụ dịkwuo mmaozi ebe. Enwere ike ịnweta ngwa ahụ site na iji usoro nchọta Google dị mfe - small video camera surveillance.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-akọwa nkọwa nke ngwa ahụ iji mee ka ojiji zuru ezu nke atụmatụ ya.
Akụkụ nke Google My Business App:
Onye ọrụ ahụ nwere ike ijikwa ọtụtụ ebe azụmahịa site na iji akara ngosi.
Onye nwe ụlọ ahịa nwere ike ịgbanwe aha, adreesị, na oge ọrụ nke azụmahịa.
Onye ọrụ ahụ nwere ike nyochaa na zaghachi ndị nyocha ndị ahịa site na ngwa ahụ.
Imelite foto na posts dị mfe site na ikpo okwu Google
Nchịkọta nchịkọta dị elu na-eme ka nlele anya n'ịntanetị na nkwado ndị ahịa.
Ngwa Google My Business mịpụtara ọzọ nwere njirimara ndị ọzọ mara mmaka onye nwe ahia. Ike ndị a gụnyere:
Nyochaa otú e si egosipụta ahịa ahụ na Google, Google Maps, na ọchụchọ Google.
Nyochaa nchịkọta arụmọrụ nke Google + rụrụ.
Nweta nzaghachi zuru ezu site na nyocha ndị ahịa na ozi ebe.
Jikwaa ebe n'oge ọ bụla..
Na-egosi ọnọdụ na ebe adreesị ozi-e maka ụlọ ọrụ na-egbochi arụmọrụ.
Ngwa ngwa Android dị na Google Play. Ọzọkwa, ngwa iOS nwere ike ibudatasite na Apple's App Store. O nweere onwe ibudata ma ọ bụ melite ngwa Google My Business. Ngwa Google My Business ohuru jikọtara na SEOederede, ngwa YouTube, na ngwa Google Analytics, iji jikọta data ma ọ bụ ozi dị mkpa iji chọpụta ozi ọnọdụ ebe.
Ịghọta Google Business m
ngalaba Google My Business Overview na-egosi akụkụ dị mkpa nke ngwa ahụ.Akaụntụ Google m nyere aka na-enye ozi bara uru gbasara iji ngwa ahụ. Enweghị akwụ ụgwọ ọ bụla mgbe ị na-eji ngwa ahụ. Naanị ihe ọ chọrọoge na mmelite mmelite nke onye ọrụ. Onye nwe ahia nke nwere otutu ebe kwesiri ibu ụzọ dozie ebe kachasị elu na-adabere na egouru ma ọ bụ uru bara uru. E nwere ike ibudata ebe a n'otu n'otu ma ọ bụ na nnukwu site na iji nchekwa data ma ọ bụrụ na ha karịrị 10onye nwe ya kwesiri ịzụlite Akaụntụ Akaụntụ ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị na-achịkwa ọnọdụ ahụ.
Igosipụta ọchụchọ mpaghara
Chọọchị mpaghara ahụ gụnyere usoro SEO. Ọ bụ nkọwa zuru ezu karia isi Google,Bing, na Yahoo nyocha nkeonwe. Nnyocha mpaghara na-arụpụta ihe site na iji usoro nkewa; dịka ọmụmaatụ, Google Maps, Apple Maps, Akụkụ anọ,Yellow Pages, na Onye na-enye ndụmọdụ na njem. SEO na-emezi nlezianya ahia na ahia ahia ndi ahịa. Ọ gụnyere inyefe data dị mkpaọtụtụ narị ebe nrụọrụ weebụ. Imezi usoro nyocha mpaghara ka ịchọrọ ngwanrọ dị elu dị ka Google My Business. Ọ bụ isinyocha weebụ n'ịntanetị n'ụwa. Nchịkọta elu map nke ngwa ahụ dị oké mkpa iji melite ọchụchọ mpaghara maka ebe azụmahịa.
Ngwa Google My Business bara uru iji melite ntanetị nke azụmahịa.Ndị ahịa ahịa ga-adị elu mgbe niile na saịtị azụmahịa nke nwere nnukwu ọnụnọ n'ịntanetị. Ihe bụ isi nke onye nwe ụlọ ahịa ọ bụiji mee ka ndị ahịa na-aga na ebe nrụọrụ weebụ.